ikhaya » iindaba » I-Miller Equipment Support Equipment kunye nee-Microphone zeRØDE zinikezela ngamanqaku angaphezulu, i-Massive $ 500,000 I-Pool Prize.
I-Miller Equipment Support Equipment kunye nee-Microphone zeRØDE zinikezela ngamanqaku angaphezulu, i-Massive $ 500,000 I-Pool Prize.
ISDDNEY, MAY ME8, 2017 - "I-RØDE Reel yami" iyabuya ngonyaka wayo wesine kwi-2017 kwaye I-Miller Camera Support Equipment, Inkokheli ekuveliseni izisombululo zenkxaso yekhamera ezitsha, zivuyisayo kakhulu ukuba ziphinde zibe ngumxhasi oyintloko. Ngokufutshane neengxelo zevidiyo ze-8,000 ezivela kwii-89 kumazwe, "I-ReØ Reel Reel" ayizange ibe yintsebenziswano enkulu yefetshane yefilimu emfutshane, kodwa ibuye yenzeke njengesiqhelo phakathi kwehlabathi Ifilimu Kuluntu. UMiller uya kuba neembasa zokhuphiswano, ezibandakanya ezintathu iMiller DS20 Solo CF Tripod Systems kunye neenkqubo ezintathu ze-AIR Alloy Tripod Systems.
I-RØDE Microphones iqalise "iRØDE Reel Reel" kwi-2014 ukuya kumazwe ngamazwe. Ukhuphiswano lubuyela kwi-2017 kunye nekhefu elongeziweyo lentengo ye-$ 500,000 kwaye, ewe, amanqaku angaphezulu kunanini ngaphambili.
Ukusuka kumculi ukuya kubafundi - bonke abenzi befilimu bayakhuthazwa ukuba bathathe inxaxheba baze balise ibali labo. Ukungena kwi "Reel My Reel," abantu bafuneka ukuba benze ifilimu emfutshane kwemizuzu emithathu okanye ngaphantsi, kunye ne-back-the-reel ebonakalayo eyenza imveliso yeRØDE isetyenziswe ngexesha lokuveliswa kwefilimu.
Isitifiketi sokungena sikhululekile kwaye siyafumaneka ngoku Www.myrodereel.com.
Kwi-2017, iqela lamabhaso amancinci amahlanu abonakaliswe kwiminyaka edlulileyo sele ibe ezintandathu.
Igalelo leGwebi leGwegwe yefilimu emfutshane kakhulu
Ikhefu leCandelo likaKhetho kwifilimu efutshane kakhulu
Young I-Filmmaker Ibhaso kwifilimu emfutshane kakhulu engenayo kwi-18
imazi I-Filmmaker Ibhaso. Eli bhaso, elikhethwe yiphaneli yokugweba, lenzelwe ukukhuthaza nokubhiyozela abasetyhini kummandla wefilimu.
Ngayinye yale mivuzo ixabisa ngaphezu kwe-USD $ 40,000.
Ibhaso yeBTS kwifilimu ephezulu emva kwe-scenes ikwahlukana okokuqala kwiindidi ezimbini:
I-BTS yeBanga leMfundo, eyona nto ifundiswa emva kweemifanekiso
I-BTS I-Award ye-BTS, ngenxa yezona zinto zizonwabisa emva kweemidlalo.
Iifom ezintsha ze-2017 ziquka: Ifilimu ehamba phambili yeViettual (usebenzisa iikhamera ze-360-degree), i-30 yesibini ye-TVC (ye-RØDE, ngokwemvelo) kunye ne-Best Vlog. Uluhlu olupheleleyo lwezigaba lunokufumaneka Www.myrodereel.com.
I-RØDE Microphones idibene kunye nemveliso ehlonishwayo Ifilimu, Ukudibanisa i-pool yexabiso elincinci elixabiswa ngaphezu kwe-$ 500,000, kuquka nemveliso emikhulu evela kuMiller.
"Sivuyiswa kakhulu ngokusebenza noMiller kwakhona ngeRØDE Reel kwi-2017," utshilo uDamien Wilson, CEO weRØDE. "Intsebenziswano yethu yoshishino ilungiswa ngokucophelela, sikhetha abo abanomdla wabo Ifilimu Kwaye umgangatho ubonakalisa wethu. UMiller yi-epitome yalezo zithethe kunye nokukhetha okugqibeleleyo ukukhuthaza nokuvuza abenzi befilimu abasuka kwihlabathi jikelele. "
"Impumelelo yefilimu yithuba elihle kwisizukulwana esilandelayo Ifilimu I-talent uCharles Montesin, uthengisa umhlaba jikelele kunye nomphathi wokuthengisa, i-Miller Camera Support Equipment. "Ngokuthatha inxaxheba kwi-'RoeDE Reel 'yethu, sijonge ukukhuthaza ubugcisa nokuxhasa iinjongo ezizayo zabenzi befilimu."
Izibhengezo ze "RØDE My Reel" zivuliwe ukusuka ngoMatshi 1st kwaye zivale ngoJuni 30th, 2017. I-RDE ihlinze i-pack yokungena yamahhala, ekhoyo ngoku ngokubhalisa kuyo Www.myrodereel.com.
utyelelo Www.myrodereel.com Ngoku ufunde kabanzi.
Malunga nee-Microphone zeRØDE
RØDE Microphone (Www.rode.com) Ukuyila kunye nokuvelisa ii-microphone eziphezulu kunye nezixhobo ezinxulumene ne-studio, ukuhlala kunye nokusetyenziswa kwendawo. Iimveliso zayo zenzelwe kwaye zenziwe ngokuyinhloko eSydney, e-Australia kwaye zithunyelwa kumazwe angama-113 kwihlabathi jikelele. I-2017 yi-50 yeminyaka ye-RØDE inkampani yomzali Freedman Electronics, eyaqala ishishini kwi-1967.
Mayelana neMedia Camera Support Equipment
Eyasungulwa kwi-1954, i-Miller Camera Support Equipment design, ivelisa kwaye ihambisa iintloko zobuchwephesha kunye neendlela ezihamba phambili kwifilimu nakubonwakude, ukubonelela ngenkxaso yabaqhubi bekhamera ezihamba phambili. Ukugubha iminyaka engaphezu kwemashumi mathandathu kwishishini, uMiller ungumdala wexesha elide, umkhokeli wehlabathi jikelele kwinkxaso yekhamera nenkxaso yangoku kwaye ubamba i-patent yokuqala ye-design headprint for camera cameras, eyafumaneka kwi-1946. Namhlanje, ii-Miller ze-tripod kunye neenkxaso zenkhamera zisoloko zisetyenziselwa kwiintlanganiso ze-elektroniki (i-ENG), ukuveliswa kwe-electronic field (EFP) kunye nezicelo zevidiyo zedijithali kwiinkqubo ezihamba phambili zehlabathi, izindlu zokuvelisa, iinkampani zenkampani, ezemfundo kunye namaziko angama-65 kumazwe . Ukufumana ulwazi oluninzi, fowuna + 61 2 9439 6377 okanye u tyelele Www.millertripods.com.
I-DS20 yeSolo CF i-Tripod System I-Miller Camera Support Equipment RODE My Reel ITeknoloji yeTV ndiphila	2017-05-08
Previous: Bhuqa kwi-2017 #NABShow
next: ICANDELO LENKQUBO EPHAKATHI KUNYE NE-STATE-OF-INDUSTRY
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Izixhobo zeNkxaso zeKhamera zeMiller kunye nee-Microphone zeRØDE zinikezela ngamanqaku angaphezulu, i-Massive 0,000 Pool Pool". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/miller-camera-support-equipment-and-rode-microphones-offer-more-categories-massive-500000-prize-pool-for-world--rgest- Elifutshane-ukhuphiswano lwefilimu /. Enkosi.